Tijaabada Shaqada - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Dhammaan guddiyada ayaa 100% si rasmi ah looga tijaabin doonaa warshadda Fumax. Imtixaannada ayaa si adag loo qaadi doonaa iyada oo loo eegayo nidaamka tijaabada macaamiisha.
Injineerinka wax soo saarka Fumax wuxuu dhisi doonaa qalab tijaabo ah oo loogu talagalay shey kasta. Qalabka tijaabada ayaa loo isticmaali doonaa in lagu tijaabiyo badeecada si wax ku ool ah iyo waxtar leh.
Warbixinta tijaabada ayaa la soo saari doonaa imtixaan kasta ka dib, waxaana lala wadaagi doonaa macaamilka iimayl ama daruur. Macaamiilku wuxuu dib u eegi karaa oo la socon karaa dhammaan diiwaanada imtixaanka natiijooyinka Fumax QC.
FCT, oo sidoo kale loo yaqaan 'Functional tests', guud ahaan waxaa loola jeedaa baaritaanka ka dib marka PCBA la shido. Qalabka otomaatiga ah ee FCT wuxuu badanaa ku saleysan yahay qalabka furan iyo naqshadeynta naqshadeynta software, kaas oo si fudud u ballaarin kara qalabka isla markaana si dhakhso leh oo fudud u dhisi kara hanaan tijaabo ah. Guud ahaan, waxay taageeri kartaa qalab badan oo si dabacsan ayaa loogu qaabeyn karaa dalabka. Sidoo kale waa inay lahaataa mashaariic tijaabo aasaasi ah oo hodan ah si ay u siiso dadka isticmaala xal caalami ah, dabacsan oo jaango'an inta ugu macquulsan.
1. Maxaa ku jira FCT?
Danab, hadda, awood, factor factor, inta jeer, wareegga waajib, xawaaraha wareegga, dhalaalka LED, midabka, cabirka booska, aqoonsiga dabeecadda, aqoonsiga qaabka, aqoonsiga codka, cabbirka heerkulka iyo xakamaynta, xakamaynta cabbirka cadaadiska, xakamaynta dhaqdhaqaaqa saxda ah, FLASH, EEPROM barnaamijyada internetka, iwm.
2. Farqiga u dhexeeya ICT & FCT：